Saadaasha NOAA ee Xilliga Duufaannada Firfircoon ee Badweynta Atlantik | Saadaasha Shabakadda
Xilliga duufaanta ee Atlantic waxay noqon doontaa mid firfircoon marka loo eego Maamulka Badweynta iyo Cimilada Qaranka ee Mareykanka, oo loo yaqaanno NOAA. Guud ahaan, waxaa laga filayaa inay sameystaan ​​inta udhaxeysa 12 iyo 17 duufaanno, kuwaas oo u dhexeeya 5 iyo 8 ay noqon doonaan duufaanno, kuwaana, 2 illaa 4 waxay noqon karaan duufaanno ka sii sareeya.
Xeeldheerayaasha xilli-xilliyeedka ayaa cusbooneysiiyay saadaashooda, waxayna tilmaameen in fursadaha ay ku noqon karaan xilli caadi ah ama ka firfircoon sida caadiga ay aad u sarreeyaan: 70%.
Saadaasheedii ugu horeysay, NOAA waxay ku qiyaastay inta udhaxeysa 10 ilaa 16 duufaan inay dhici karaan, iyo 4 ilaa 8 duufaano, kuwaas oo 1 ilaa 4 kamid ah ay si gaar ah wax u burburin doonaan. Sidaa darteed, tirooyinka cusubi way ka sarreeyaan kuwa xilliyada kale, inta lagu gudajiray 12 duufaanno iyo 6 duufaanno ah oo la duubay, kuwaas oo ku saabsan 3 inta badan ay ka mid yihiin nooc ka sarreeya.
Intaas waxaa sii dheer, waxaa lagu qiyaasayaa in xilligan duufaannada, oo dhammaanaya 30-ka Nofeembar, noqo tan ugu firfircoon tan iyo 2012. Laakiin maxaa u jira fursad aad u badan oo duufaanno iyo duufaanno ka badan kuwa caadiga ah?
Waxaa jira dhowr arrimood oo xisaabta lagu darey saadaashooda: dhacdadii El Niño, taas oo durbaba daciifinaysa, dabaylaha ganacsiga in ay bilaabaan inay ka daciifsan yihiin badhtamaha kulaylaha Atlantic, marka lagu daro monsoon Galbeedka Afrika.
Sidaas oo ay tahay, madaxa kooxda saadaasha hawada ee NOAA, Gerry Bell, ayaa yiri Qaababka heerkulka badda ayaan aad ugu habbooneyn xilliga xilliga si aad u firfircoonSidaa darteed, ifafaalaha La Niña, oo dhici kara bilaha soo socda, saameyn badan kuma yeelan doono xilligan duufaanta.
Waqtigaan la joogo, waxaa jiray shan duufaano la magacaabay, iyo laba duufaano: Alex iyo Earl, oo sababay dhimashada ugu yaraan 49 qof Mexico.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaannada » NOAA waxay rajeyneysaa xilli duufaan firfircoon oo ka dhaca Atlantic